Azụmaahịa ohu Europe, ọkachasị ndị ndị Portuguese bibiri Africa: yabụ, ọbịbịa nke ikpeazụ na Africa bụ njedebe nke afọ 4 nke ihe omume ndị Kamites nụrụ site ndị ojii / ndị Africa.
Site na: KongoLisolona: June 6, 2020 00: 30 Enweghị asịsa
Abia na Africa na ebe ozo site na ndi Vatican ka ha tua, mee ka ndi isi ojii / ndi Africa ghara inara ego ha; ndị Portuguese biri bibiri n'ụzọ na ike na " Kongo Dia Ntotila ". Alaeze a Kongo, na-anọchite anya akụ na ụba n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ndịda Africa, alaeze ukwu a Mwene Mutapa ma ọ les Ojii / Africa guzogide dike.
Ọ bụ n’uche a ka anyị siri na mbụ akwụkwọ ozi butere n’aka King Alphonse, n’etiti omume ọma ndị ọzọ zuru oke iji lụso ọgụ, iji merie iji merie na ido onwe ya n’okpuru Sarassins niile ọ bụ nye ha. ndị isi ala nile na ndị iro nke Kraịst ebe ọ bụla ha nọ, ya na ala-eze ha, ndị duchies, ndị isi, ngalaba, akụrụngwa, arịa ụlọ na ụlọ ha, ihe niile ha nwere, iji belata ndị ha baa n'ohu ebighebi iji nye onwe ha. jiri maka ma jiri ndị a a na-akpọ alaeze duchies megide ndị isi, akụrụngwa, ihe onwunwe na ọtụtụ n'ime ndị a na-ekwesịghị ntụkwasị obi na ndị ọgọ mmụọ.
Mara na ụzọ kacha nso iji gaa n'ọdịniihu, ọdịmma nke ndị mmadụ bụ nke a na-enweghị mgbagha na-aga n'ime omimi na nkwalite nke ihe gara aga anyị.
Ọkt23 04: 59